"फारिनिना": कुकुरका लागि खाना, गुणस्तर र स्वादिष्ट
कम्पनी "फारिनिना" को रणनीति एक कुकुर खाना हो, केवल जनावरहरु को फिजियोलजील संग सम्बन्धित। यो दृष्टिकोणले कम्पनीलाई वार्षिक उत्पादन र बिक्रीको मात्रा बढाउन अनुमति दिन्छ।
कम्पनीको विकासको इतिहास
विकासको इतिहास टाढा 1965 मा सुरु भयो। फिड्सको उत्पादनको लागि कम्पनी "रुसोसो फिड" फ्रान्सेस्कोको रुसो द्वारा स्थापित गरिएको थियो। सुरुमा, फार्म खेती जानवरहरूको लागि उत्पादन गरिएको थियो। फर्मको विकासमा सक्रिय भाग र एन्जेलो रुसोको मालिकको छोरा लेक्यो।
उनको पहलमा, Farmina Pet Foods को नाम मा एक अंग्रेजी कम्पनी संग सहयोग शुरू भयो। सानो जनावरहरूको लागि पितृ खाना खाने बजारको विकासको लागि सम्भावनाहरूको अध्ययन सही दिशा हुन लागे। समयको बेला, इटालियन कम्पनी Farmina Pet Foods अवशोषित भयो।
कम्पनीको "Farmina" मा व्यंजनहरु को विकास मा सावधान र गहिराई विश्लेषण को लागि धन्यवाद, कुत्ते को खाना तेजी देखि लोकप्रिय भएको छ। गुणस्तर को स्तर को बनाए राखन को लागी कम्पनी ले आफ्नो प्रयोगशाला को निर्माण गर्यो। नेपल्स मा पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय को विशेषज्ञहरु सहयोग मा शामिल थिए।
निस्सन्देह, यो तर सकारात्मक परिणाम दिन सकेन। आज फारिनिना प्रोडक्ट्स - कुकुर फूड - संसारका चालीस देशहरुमा जानिन्छ।
कम्पनी "फारिनिना": उत्पादन
विभिन्न देशहरूमा तीन वटा कारखानाहरू : इटाली, सर्बिया र ब्राजिल - ब्रान्ड नाम "फारिनिना" अन्तर्गत सूखी फीडहरू उत्पादन गर्छन्। कुकुरको खाना केवल प्राकृतिक उत्पादनबाट बनाइन्छ। यो धेरै परीक्षणहरू द्वारा पुष्टि गरिएको छ। कच्चा मालहरू विशेष रूपमा इटालियन छन्। प्रत्येक धेरै गुणवत्ता प्रमाणपत्रहरूसँग छ, बिना यो उत्पादनमा मात्र अनुमति छैन।
साक्षर पशु पशु चिकित्सकको कर्मचारीले कुकुरको खानाको लागि "Farmina" कारखानाहरूको विकास र उत्पादनलाई अनुमति दिन्छ सबै भन्दा फरक उद्देश्यहरू, ध्यानमा लिनु जनावरहरूको विशेषताहरू। एक विशेष फीड लाइन विकास गर्दा, पाङ्ग्राहरूको उमेर र शारीरिक अवस्थालाई ध्यान दिइन्छ।
आधुनिक प्रविधिहरूको प्रयोगले कच्चा मालको उत्पादनको तनावलाई अनुमति दिँदैन। कम्पनी द्वारा उत्पादित उत्पादनहरूको मात्रा यस्तो तरिकाले गणना गरिएको छ कि गोदामहरुमा समाप्त उत्पादनको कुनै स्टक छैन। उपभोक्ताहरूले सधैं जनावरहरूको तालिकामा मात्र ताजा खाना पाउने अवसर पाउनेछन्। कम्पनी Farmina (कुकुर खाना) को यस्तो संगठनको साथ, ग्राहक प्रतिक्रिया मात्र सकारात्मक छ।
कुकुर खानाको प्रकार
आफ्ना ग्राहकहरूको हेरचाह गर्दै, फिड लाइनहरूको विकासकर्ताहरूले सबै कोटिहरूलाई खाता बनाउन खोजे। आठ व्यावसायिक लाइनहरु र दुई पेशेवर लाइनहरु, विशेष रूप देखि खाते मा लेने को बिरुवाहरु र पशु चिकित्सक विशेषज्ञों को रुचिहरु, विकसित गरिएको छ र मांग मा छ।
सबै लाइनहरूमा कम ग्ल्यामिकिक सूचकांकले घरेलु पित्रीहरूमा मोटापछि बचाउन र परिणामस्वरूप, मधुमेहको विकासलाई अनुमति दिन्छ। यो विशेष रूप देखि पशु को लागि कम अनाज र अनाज मुक्त चारा को रेखाहरु मा लागू हुन्छ। तिनीहरू कुकुरको शारीरिक आवश्यकतासँग पूर्णतया मेल खान्छ। Farmina को लागि विशेष फिडहरू उत्पादन गर्दछ:
गर्भवती र स्तनपान महिलाहरु;
पिडाहरू, उनीहरूको उमेरमा लिने;
साना चराको कुकुर;
पशु, एक सक्रिय जीवन शैली को अग्रणी।
विशेषगरि आहारका खानाहरू कुत्तेको रोगलाई ध्यान दिँदै:
गुर्दे रोगको साथ;
पुरानो हेपेटिक अपर्याप्तता संग;
बढेको सेन्सर पाचन र एलर्जीको साथ;
पुरानो हृदय विफलता संग।
Puppies मा अनाज मुक्त चारा मा उत्पाद को प्रतिशत निम्नानुसार छ:
70% - जनावर मूल;
30% - सब्जियों, विशेष पूरकहरु, फलहरु को लागि खातों।
वयस्क कुत्तों को लागि फीड:
पशु उत्पादनको उत्पादन - 60%;
फल, सब्जियां, खाद्य additives - 20%;
अनाज बनाउन - 20%।
सबै पशु समूहहरूको लागि फिडले धेरै मेनु विकल्पहरूद्वारा प्रतिनिधित्व गर्दछ।
वयस्क कुत्तों को लागि एक संतुलित विविध सूखी भोजन निम्न मुख्य अवयव शामिल छ:
प्रोटीन (जनावर मूल):
- वसा (पशु मूल):
कोड लिभर तेल ;
भिटामिन ए, ई, सी, बी;
- माइक्रो - र म्याक्रो तत्वहरू।
Farmina कुक फूड्स को लाभ
"फारिनिना" कारखानों मा उत्पादित कुत्तों को लागि भोजन, सबै भन्दा उच्च, उच्च गुणवत्ता को। दोस्रो निरपेक्ष प्लस तयार फिडको ताजाता हो। पशुहरूको विभिन्न समूहहरूको लागि फिड लाइनहरु को विकास को लागि एक गंभीर दृष्टिकोण, उनको उमेर, साइज, शारीरिक स्थिति र स्वास्थ्य ले, जानवरहरुलाई पुरा तरिकाले खिलाया को अनुमति दि्छ।
फिडको उत्पादनमा उच्च अभिनव प्रविधिहरूको प्रयोगले उत्पादनको जीवनभरि भिटामिन र उनीहरूको उपयोगी गुणहरू सुनिश्चित गर्दछ।
प्राविधिक क्षमताओं लाई सीधा र भिटामिन को हस्तांतरण को सीधा granular मा हस्तांतरण को अनुमति दि्छ। यसले फिडको उच्च स्वादिष्ट गुणहरू सुनिश्चित गर्दछ र सबै सामग्रीको रासायनिक र भौतिक प्रक्रिया बाहिर निकाल्न अनुमति दिन्छ।
अन्तमा, उत्पादनका प्याकेजिङले "फारिनिना" (कुत्तेको खाना) उत्पादनको असुरक्षित सुरक्षा र गुणस्तरलाई सुनिश्चित गर्दछ। समीक्षाहरू आभारी कुकुर मालिक कम्पनीको विकासको सही दिशा पुष्टि गर्छन्।
सुँगुरहरू कहाँ बस्छन्?
तोतको प्रकार - पात्रको जटिलता र संचारको आकर्षण
ब्रिटिश बिल्लियों को खिलाने को लागि एक भित्री पालतू, या
कार स्टेरियोको सहि जडान
"पानी razolesh छैन": मूल्य phraseologism र यसको प्रयोग उदाहरणहरू
एक आस्टसीलस्कप कसरी प्रयोग गर्ने? एउटा पोर्टेबल डिजिटल आस्टसीलस्कप कसरी प्रयोग गर्ने?
यो थियो 2012 मा नाइस मा भूकम्प
Kitsch - स्वाद को कमी छ?
Alopecia - एक कि रोग लागि? कारण, लक्षण, alopecia को उपचार
कसरी अशक्तता बनाउन